ADY AMIN’NY « CORONAVIRUS » : Hotokanana alohan’ny 26 jona ny labôratoara manokana ho an’ny Malagasy
Alohan’ny 26 jona izao no hotokanana ny labôratoara fanaovana fitiliana izay fananan’ny Malagasy madiodio. 18 mai 2020
Izany dia tafiditra indrindra ao anatin’ireo paikady hiadiana amin’ny mety ho fihanahan’ ilay tsimok’aretina “Covid 19” eto amintsika.
Mitohy hatrany ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana Malagasy manoloana ny ady hatao amin’ny tsimok’aretina “Covid 19”. Manodidina ny roa volana mahery teo izay no niatrika izany ny firenena ary, hatreto dia tsy mitsahatra ny manatsara an’ireo fomba rehetra hoentina hiatrehana izany ny fanjakana.
Tafiditra indrindra ao anatin’ireo paik’ady mba hahafahana mifehy ny valanaretina ao anatin’ny fotoana fohy ny ahavitana fitiliana marobe isan’andro. Anisany olana sedrain’i Madagasi-kara amin’ny fiatrehana ny “oronavirus” anefa ny tsy fahampian’ny labôratoara hoentina hanaovana an’izay fitiliana izay. Hatramin’izao dia mbola mitana ny laharana voalohany amin’ny fanaovana fitiliana an’ireo ahiahiana ho tratran’ny tsimok’aretina ny “Institut Pasteur de Madagascar”.
Raha tsiahivina anefa ny zava-nitranga dia nampiteraka savorovoro teto amin’ny firenena ny antontan’isa diso navoakan’ity ivon-toerana fanaovana fitiliana ity, herinandro mahery teo izay. Nolazaina tamin’izany fa misy 67 indray mitondra ny tsimok’aretina tao anatin’ny iray andro. Nametraka ahiahy tamin’io antontan’isa io ny fanjakana satria sambany no nisy tarehimarika ambony be tahaka izany hatramin’izay nahatafidiran’ilay valan’aretina teto amintsika. Tapaka fa naverina ny fitiliana an’ireo olona voalaza io ary hita fa tsy nisy afa-tsy ny folo tamin’izy ireo ihany no voaporofo
fa mitondra ny tsimok’aretina. Hentitra ny Filoha, raha nilaza omaly, fa tsy azo ekena ny trangan-javatra tahaka izany. Tranga izay tsy fantatra, hoy izy, fa niniana natao mba hanakorontanana saim-bahoaka sy hahatonga ny vahoaka tsy hatoky ny fitondram-panjakana intsony.
Manoloana iny tranga iny no nanaovan’ny Filoha fanamby ny hananganana ivon-toerana lehibe fanaovana fitiliana izay ho an’ny Malagasy madiodio. Mialoha ny fankalazana ny fiverenan’ny faha-60 taona nahazoan’i Madagasikara ny fahaleovan-tena, ny 26 jona izao no hanaovana ny fitokanana izany, raha ny fanambaràna nataony. Tanjona apetraka, hoy ny Filoha, dia ho lasa maodely aty Afrika sy aty amin’ny ranomasimbe Indianina i Madagasikara indrindra manoloana izao ady amin’ny valan’aretina “coronavirus” izao. Iantsoany fanohanana avy amin’ny vahoaka Malagasy izany, iantsoany ny hananan’ny vahoaka hambom-pirenena, ka ho saropiaro amin’izay vokatra rehetra misy eto an-toerana fa tsy ireo any ivelany no hankasitraka izany noho isika. “Mila mahatoky sy mifampatoky isika”, hoy ny Filoha nanamafy.
Mitohy ny hamehana ara-pahasalamana, isan’ireo Faritra mena i Alaotra Mangoro
Mbola mitohy ao anatin’ny 15 andro manaraka indray ny fiatrehana ny hamehana ara-pahasalamana eto Madagasikara. Hatreto, tsy mitsaha-mitombo ny isan’ireo olona voamarina fa mitondra ilay tsimok’aretina « Coronavirus ». Araka ny antotan’isa ofisialy navoakan’ny foibem-pibaikoana misahana ny ady hatao amin’ny valan’aretina « Covid 19 » eny Ivato omaly dia efa tafakatra 302 ny isan’ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina « Coronavirus » eto Madagasikara. Manoloana izany dia mitohy ny fandraisan’andraikitry ny fitondram-panjakana. Nohamafisina ireo fepetra ara-pahasalamana efa napetraka hatramin’izay. Notohizana ao anatin’ny 15 manaraka indray ny fiatrehan’i Madagasikara ny hamehana ara-pahasalamana mba hanohizana an’ireo ezaka rehetra efa natao ho entina hifehezana an’ity areti-mandoza ity tsy hihanaka eto Madagasikara. Ankehitriny, tafiditra ao anatin’ireo faritra mena amin’ity valan’aretina ity ny Faritra Alaotra Mangoro. Ny Distrikan’i Moramanga izay efa nahitana trangan’aretina tamin’ny alalan’ny fifampikasohana, raha ny tatitra navoakan’ny Ccoc.
Araka izany, ankoatra ny Faritra Analamanga, Atsinanana ary Matsiatra Ambony dia mihatra any Alaotra Mangoro ihany koa ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Isan’izany ny tsy fahafahana mivoaka amin’ny alina, ny fitondrana aro-tava isaky ny mivoaka ny trano ary ny tsy fahafahana mamory olona mihoatran’ny 50 isa. Mbola maro ny dingana holalovan’ny firenena mandritra sy ao aorian’ny fiatrehana an’ity valan’aretina ity. Efa namolavola ny tetik’ady ho entina hanarenana ny toe-karem-pirenena sahady anefa ny Filoha, nambarany fa vonona ny tenany hanarina ny firenena ary vonona hiara-hiasa sy misokatra amin’ireo firenena any ivelany.